2013-06-16 ~ မောင်လေ့လာ | Free Download Software Full Version
IN Cleaner - ON Saturday, June 22, 2013 No comments
ကွန်ပျူတာတွေမှာရှိထားသင့်တဲ့ဆော့ဝဲကောင်းလေးတစ်ခုပါအမှားတွေနဲ့ Virus တွေကိုရှင်းထုတ်ပေးဖို့အရမ်းသင့်တော်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာဘာကြောင့်လေးနေတာလဲလို့ သိချင်ရင်ဒီဆော့ဝဲလေးနဲ့ စစ်ကြည့်
အဖြေသိလာလိမ့်မယ်...။နေစဉ် သုံပြီးတိုင်း အိပ်ခါနီးတိုင်း ရှင်းပေးလို့ ရတယ် ။ စောင့်နေစရာမလိုပါဘူး
ရှင်းပြီးရင် Auto shutdown လုပ်ပေးထားဖို့ ပါလာတယ် ။ 2013 အတွက်အသစ်ထွက်လာတဲ့ဟာလေး မလို့ အသုံးလိုသူများ ယူလိုက်ပါ ။
ဒေါင်းပြီးရင်တော့ Setup ဖိုင်ကို Install လုပ်လိုက်ပါ Install လုပ်ပြီးရင်တော့ ပရိုဂရမ်ကို Run လိုက်ပြီး ပွင့်လာတဲ့ Box တွေကို အောက်ကပုံရောက်တဲ့အထိ Next တွေချည်းပဲ နှိပ်ပေးသွားလိုက်ပါ
အဲဒီအဆင့်ကိုရောက်ရင်တော့ Upgrade ကို နှိပ်လိုက်ပါအောက်ကပုံအတိုင်း ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်
License Keys ထည့်မယ်ဆိုရင် အင်တာနက် Connection အရင်ပိတ်ပြီးမှထည့်ပါအဲဒီထဲက Enter
License ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနောက်ထပ်ပွင့်လာတဲ့ အကွက်ထဲမှာထည့်ဖို့လိုင်စင်ကီးကိုတော့ keygen ဖိုဒါထဲက keygen ဖိုင်ကို Run ပြီးကူးယူထည့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ Activate ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ အပေါ်ဘားတန်းမှာ ပေါ်နေတဲ့ Free ဆိုတဲ့စာသားလေးအစား Pro လို့ ပြောင်းသွားပြီး Full Version အဖြစ် အသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီ
* Fixed general bugs Errors
IN Antivirus - ON Saturday, June 22, 2013 No comments
Trojan, Spywar,Malwar,Virus ရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးပြီး အထိရောက်ဆုံး ရှင်းလင်းပေးနိုင်မယ့် Software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Virus Update ပုံမှန်ပြုလုပ်လို့ရပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့Network ကိုနှေးကွေးလေး
လံစေတဲ့ Virus တွေကိုအကောင်းဆုံးရှင်းလင်းပေးမှာပါ Antivirus တွေနဲ့လည်းတွဲသုံးလို့အဆင်ပြေ
ပါတယ်အခြားအသုံးဝင် Feature များစွာလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ် Update လေးမို့
တင်လိုက်တာပါစိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်မှာ Download ရယူနိုင်ပါပြီခင်မျာ။
Download>>> AFileZ (or) solidfiles (or) dropbox (or) uppit
IN Burning - ON Saturday, June 22, 2013 No comments
နာမည်လေးမြင်လိုက်ရုံနဲ့ သိကြမှာပါ ဖွင့်မရတဲ့ တချို့ DVD အခွေတွေကို Format မရွေး ဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ် လေးပါ DVD Copy လုပ်တဲ့ Softwrae ပါ။ Protect လုပ်ထားတဲ့ DVD ကိုတောင် Copy လုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အခြားအသုံးဝင်တဲ့ Features တွေလဲ များစွာပါဝင်ပါသေးတယ်လိုအပ်ရင် အောက်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ........
Download>>>Uppit (or) solidfiles (or) AFileZ
AnyDVD -auniversal program designed to remove the protection from any DVD-ROM drive, so you can watch DVD-movies onacomputer DVD-ROM, the regional code is not compatible with this DVD-ROM. Even if your drive is not "obezzonen," you have the ability to copy discs with any region code directly fromaDVD-ROM to DVD ± RW. While copying to DVD ± RW, AnyDVD will decrypt protected data * on the fly *. Asaresult, you get unprotected backup your DVD disc!
IN Photo and Media Editor Tools - ON Friday, June 21, 2013 No comments
IN Converter - ON Friday, June 21, 2013 No comments
Ann Video Converter Pro ဟာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ Video Format တွေကို ပြောင်းတဲ့ software ပါ..
ဗွီဒီယို အရည်အသွေးလည်းကောင်းပြီး Video Format အမျိုးမျိုး ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။Full Version ဖြစ်အောင်Install ထည့်ပြီးတာနဲ့ ဒီကောင်လေးကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင်တော့ Desktop က ဒီကောင်လေးရဲ့ Icon ပုံလေးပေါ်မှာ Right Click >> Properties >> Open Files Location နဲ့ ပေါ်လာတဲ့ ဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်တွေထဲကို Crack file ကို copy-paste နဲ့ ထည့် ၊လိုက်ပြီ ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရသွားပြီဖြစ်လို့ အဆင့်ဆင့် နောက်ပြန် တခုစီ ပိတ်ပေးလိုက်ပါ..။ နောက်ဆုံးမှာ Apply >> OK ပေးလိုက်ရင် ဒီကောင်လေးကို ကောင်းစွာအသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီလိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ...
This tool converts video formats: HD, DVD, AVI, MPEG (DVD / VCD / mpeg1 / mpeg2), MP4 (IPOD, PSP, 3GP) WMV, RMVB, MOV, or converts video to audio (MP3, AAC, AC3, and other audio formats). It also converts video to formats compatible with smartphones iPhone, HTC, Nokia n8 n97 n95, Motorola, Sony Ericssion, Samsung, Blackberry.
Supply best video converter quality and fasted speed for portable mp4 player and smartphone, audio format on windows computer.
Developer: AnnVideo Digital Technology Ltd.
Product page: www.annvideo.com
IN Video Editing - ON Friday, June 21, 2013 No comments
IN YouTube Downloader - ON Friday, June 21, 2013 No comments
Youtube က Video တွေကိုဒေါင်းချင်တဲ့ သူများအတွက်ပါ Version အသစ်ထွက်တာလေးတင်ပေးလိုက်ပါ
• We fixedafreezing issue with YTD on the convert tab
• Also if you have pending downloads/conversions they will be saved after you update.
Home Page : http://www.ytddownloader.com/
IN Speed Up Internet, Speed up window, System Cleaner - ON Thursday, June 20, 2013 No comments
Uniblue Registry Booster ဟာကွန်ပျူတာရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံးမြင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး..Start Menu , Registry , CPU စတဲ့ HardWare , System တို့ကို အကောင်းဆုံးအနေအထားထိရောက်အောင် ထိန်းညှိမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်....
– Clean Your System and Boost Performance. Boost system performance by cleaning out all missing, unwanted, obsolete and corrupt registry entries automatically with RegistryBooster.
– Repair Your PC and Keep It Tuned. Dramatically improve your computing experience by repairing all registry problems and minimizing application seizures and crashes.
– Exceptionally Simple to Use. Set inahighly intuitive, attractive, logical and user-friendly graphical user interface, Uniblue’s registry cleaner sets the standard for ease-of-use.
– More Scanning Options. Due to the improvements made to the scanning engine you are now able to scan for more sections within the registry.
– An Ignore List. This is quite an innovative feature and very useful for those users who are extra cautious with their registry. By specifying the registry section and path the user will be able to exclude registry parts from the scan.
– Log Generation. Displaysatranscript of all the actions performed on the registry byaparticular fix operation. Especially helpful for those users wanting to know what has been done to their registry.
– Windows Vista Compatible. RegistryBooster is now fully Windows Vista compatible and can still be run on Windows XP. The program automatically adapts itself according to the version of your operating system so you do not have to configure any manual settings.
– Safe and Trusted. Avoid crashes, seizures, slow downs and error messages with the safest and most trusted solution fromaleading software vendor.
Home Page: http://www.uniblue.com/fr/software/registrybooster/
IN Downloader - ON Thursday, June 20, 2013 No comments
တချို့ Internet ဆိုင်တွေက YouTube Video တွေကို IDM နဲ့ ပေးမဆွဲတတ်ကြပါဘူး ဒါ့ကြောင့် YouTube က Video တွေကို အလွယ်တကူ ဆွဲယူဖို့ ဒီ YouTubeGet လေးက ကူညီပေးမဲ့ အပြင် ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ Format တွေကိုလည်း တစ်ခါထဲ ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်..။ သူ့ရဲ့ Feature လေးတွေကိုတော့ အောက်မှာ ဆက်လေ့လာလိုက်ပါ လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ..
Home Page : http://www.youtubeget.com/
IN Burning - ON Wednesday, June 19, 2013 No comments
Menu , Subtitle , Background Music တွေရဲ့ DVD Movie များကိုဖန်တီးချင်သူများအတွက် Software ကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ..
IN Uninstaller - ON Wednesday, June 19, 2013 No comments
တော်တော်လေး ကောင်းတဲ့ Uninstall လေးပါ ။ ဖြုတ်ချင်တဲ့ Program တွေကို အစအနမကျန်အောင် ရှင်းထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်Uninstaller ဆိုပေမဲ့လည်း တခြား Feature တွေအများကြီး ပါပါသေးတယ်
လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ..
IN Antivirus - ON Wednesday, June 19, 2013 No comments
တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Full Version ဖြစ်အောင်Install ထည့်ပြီးတာနဲ့ ဒီကောင်လေးကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင်တော့ Desktop က ဒီကောင်လေးရဲ့ Icon ပုံလေးပေါ်မှာ Right Click >> Properties >> Open Files Location နဲ့ ပေါ်လာတဲ့ ဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်တွေထဲကို Patch file ကို copy-paste နဲ့ ထည့် ၊လိုက်ပြီ ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရသွားပြီဖြစ်လို့ အဆင့်ဆင့် နောက်ပြန် တခုစီ ပိတ်ပေးလိုက်ပါ..။ နောက်ဆုံးမှာ Apply >> OK ပေးလိုက်ရင် ဒီကောင်လေးကို ကောင်းစွာအသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီ
IN Utilities - ON Wednesday, June 19, 2013 No comments
မူလ Windows မှာပါတဲ့ သာမန် copy ထက် အဆ 20 % ကနေ 120% အထိမြန်ပါတယ်တဲ့..Data တွေကိုအမြန်ဆုံးနှုန်းနဲ့ Backup ဆွဲနိုင်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ အချိန်တွေကုန်ခြင်းမှ အများကြီးသက်သာစေပါတယ် ဒီကိစ္စကို ExtremeCopy Pro 2.3.2 နဲ့ အကူအညီယူနိုင်ပါတယ်.... 32 အတွက်ရော 64 အတွက်ပါ တင်ပေးထားပါတယ်လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ..
IN windows 8, Windows ဆိုင်ရာ - ON Wednesday, June 19, 2013 No comments
Download>>>zippyshare (or) dropbox (or) uppit
IN Converter - ON Tuesday, June 18, 2013 No comments
Wondershare Video Converter Version အသစ်ထွက်လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...DVD တွေကို Rip လုပ်နိုင်သလို Burn နိုင်ပါသေးတယ်..ဒါအပြင် Audio အသံများကိုလည်းစိတ်ကြိုက်တည်းဖြတ်နိုင်သလို
Video များကိုလည်း စိတ်ကြိုက် Format အဖြစ်သို့ လျှင်လျှင်မြန်မြန်နဲ့ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
Full Version ဖြစ်အောင်Install ထည့်ပြီးတာနဲ့ ဒီကောင်လေးကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင်တော့ Desktop က ဒီကောင်လေးရဲ့ Icon ပုံလေးပေါ်မှာ Right Click >> Properties >> Open Files Location နဲ့ ပေါ်လာတဲ့ ဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်တွေထဲကို Patch file ကို copy-paste နဲ့ ထည့် ၊လိုက်ပြီ ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရသွားပြီဖြစ်လို့ အဆင့်ဆင့် နောက်ပြန် တခုစီ ပိတ်ပေးလိုက်ပါ..။ နောက်ဆုံးမှာ Apply >> OK ပေးလိုက်ရင် ဒီကောင်လေးကို ကောင်းစွာအသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီ..လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ...
Download>>>zippyshare (or) solidfiles (or) dropbox (or) fileswap
IN Downloader - ON Tuesday, June 18, 2013 No comments
အင်တာနက်ကနေ Quality ကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းတွေကိုရှာပြီး မြန်မြန် Download ရယူချင်တယ်ဆိုတဲ့ သူများအတွက် Software ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်..တူရိယာပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့ တီးခတ်ထားတဲ့ သီချင်းတွေကို ရှာဖွေရယူရုံမျှမက.. Ipod , itune စတဲ့ မိုဘိုင်းစပ်ဆက်ပစ္စည်းများ အတွက်လည်း သီးသန့်ရှာဖွေ ရယူနိုင်ပါသေးတယ်။ အသုံးဝင်တဲ့ Feature တွေကို အောက်မှာ ဆက်ဖတ်လိုက်ပါခင်မျာ။
IN Android - ON Tuesday, June 18, 2013 No comments
ဒါလေးကိုတော့ Android Devices အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။Wondershare MobileGo ကတော့ Android Device နဲ့ PC ချိတ်ဆက်ပြီး Sync လုပ်နိုင်တယ်၊ PC ပေါ်မှာ Android App တွေကို Install လုပ်ပြီးသုံးနိုင်တယ်. PC ကနေ App တွေကို တိုက်ရိုက် ဒေါင်းနိုင်တယ် စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ. တော်တော်များများ အသုံးတည့်ပါတယ်. အခု ဗားရှင်းသစ်လေးတွေလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ.လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ..